အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော WordPress ရှာဖွေခြင်း & filter plugin - WPSOLR
Elasticsearch, Solr, Algolia အတွက် WordPress ရှာဖွေရေးပလပ်အင်
Elasticsearch, Solr နှင့် Algolia အတွက် wordpress search plugin
ဘာသာစကား ၅၀ ကျော်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည်
Elasticsearch, Solr, ဒါမှမဟုတ် Algolia နှင့်အတူမတူနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်
WooCommerce, bbPress, WPML, Polylang, ACF PRO, Toolset, Yoast နှင့်အခြားအရာများ
သင်အကြိုက်ဆုံး grids plugin ကိုမြန်စေပါ။ Elementor, Toolset Views
စာသားနှင့်ရုပ်ပုံများအတွက် AI အ
အားလုံးအဓိက themes များအတွက် 20+ သရုပ်ပြ
Algolia ရှာဖွေရေး plugin ကို
Elasticsearch ရှာဖွေရေး plugin ကို
WPSOLR "WPML-Ready" အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
bbPress ရှာဖွေရေး plugin
All In One SEO ရှာဖွေရေးပလပ်အင်
Google Vision ၏ရှာဖွေမှုပလပ်အင်
Google Natural Language search plugin
အမေဇုံ Comprehend ရှာဖွေရေး plugin ကို
AI Search - မကြာခင်လာမယ် ရက်စွဲ
မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ: Google Dialog Flow
စကားပြောဆိုသော AI: RASA
Transformers နှင့် vector embedings: BERT, GPT-3, မြန်အောင်
နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူခြင်း၊ Artificial Intelligence ခေါ် Neural Networks ခေါ်ခေါ်ဆိုမှုများသည်နေရာအနှံ့တွင်ရှိသည်။ အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ခြင်းမှသည် GPT-3 ဖြင့်စာမျိုးဆက်သို့ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်ရှာဖွေမှုသည်ဤလမ်းကြောင်းမှအကျိုးသက်ရောက်သည်။ မျိုးဆက်သစ်ဟုခေါ်သော“ Vector search” စာကြည့်တိုက်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများပေါ်ထွက်လာသည်။ သို့သော်ပျောက်ဆုံးနေသော link သည်၎င်းတို့ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံစေရန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
WPSOLR သည် Elasticsearch, Solr နှင့် Algolia တို့ကဲ့သို့ဤထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များကို WordPress နှင့် WooCommerce သို့ယူဆောင်လာခြင်းဖြင့်ဤချိတ်ဆက်မှုကင်းမဲ့သော link တစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
WPSOLR မှစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသောအာရုံကြောရှာဖွေခြင်း၊ အာရုံကြောနှင့်ဆင်တူမှု၊ open-source သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲထားသော ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ -
OpenAI ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (beta ready)
WordPress သို့ကျွန်ုပ်တို့ပို့ဆောင်လိုသောအင်္ဂါရပ်အချို့ -
နောက်ဆုံးပေါ်ပုံစံများ - ထုတ်ယူသောအရည်အသွေးအာမခံချက်၊ မျိုးပွားအရည်အသွေးအာမခံချက်နှင့်စာရွက်စာတမ်းပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် transformer အခြေခံမော်ဒယ်များ (ဥပမာ BERT, RoBERTa, MiniLM) ကိုသုံးပါ။
Modular - သင်၏နည်းပညာ stack နှင့်အမှုကိစ္စအတွက်ရွေးချယ်ရန်မျိုးစုံ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဒေတာဘေ့စ်၊ ဖိုင်ပြောင်းစက်သို့မဟုတ်မော်ဒယ်ဘောင်ကိုရွေးချယ်ပါ
ပွင့်လင်း: 100% HuggingFace မော်ဒယ်လ်အချက်အချာနှင့်သဟဇာတ။ အခြားမူဘောင်များ (ဥပမာ Transformers, FARM, ဝါကျ Transformers) နှင့်အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှု
အရွယ်မှာ - သန်းချီသောစာရွက်စာတမ်းများကိုပြန်လည်ရယူသူများ၊ Elasticsearch / FAISS တို့ကဲ့သို့အဆင်သင့်ထုတ်လုပ်သည့် backends များ၊ ဂူဂဲလ်သည် ANN algorithms နှင့်ထိပ်တန်း Vector Vector databases များမှတဆင့်။
အဆုံးမှအဆုံးသို့ - ကိရိယာအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင် - ဖိုင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ခွဲခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊
Developer နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု - debug တိုးချဲ့ရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်လွယ်သည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း - တင်းပလိတ်များကိုသင့်ဒိုမိန်းသို့ချိန်ညှိပါသို့မဟုတ်သင်၏စိတ်ကြိုက် DocumentStore ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။
စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူခြင်း - အသုံးပြုသူ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောတုံ့ပြန်ချက်များမှသင်ကြားသောအချက်အလက်အသစ်များကိုစုဆောင်းပြီးသင်၏မော်ဒယ်များကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ
AI အနေဖြင့် Dynamic Synonyms
AI အနေဖြင့် Dynamic Rankanking
စိစစ်ခြင်းဝစ်ဂျက်များ (slider, select2, color picker …)
Analytics dashboard ကိုရှာပါ
ရှာဖွေမှုသည်အစစ်အမှန်အချက်အလက်လိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည် connectors အသုံးအများဆုံး plugins ကိုရန်။
အတူချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်ပါ WooCommerce, bbPress, ACF PRO, Toolset Views, WPML, ပိုလန်, Yoast SEO, နှင့်ပိုပြီးအများအပြား။
Algolia typo အကြံပြုချက်များ၏ဗီဒီယို
သင်သည်တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြကို typo-tolerance နှင့် facets >> ဖြင့်လည်းစမ်းကြည့်နိုင်သည်
Dev စတူဒီယို WPSOLR ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
စတူဒီယို WPSOLR WPSOLR ၏နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး WordPress & WooCommerce အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်ရှားသောရှာဖွေရေး plugin ။
The Studio သည်နှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအတွေ့အကြုံကိုစုဆောင်းသည် -
Dev စတူဒီယိုကဘာလဲ WPSOLR ?
ကျွန်ုပ်တို့၏ WPSOLR ရှာဖွေရေးပလပ်အင်သည်စျေးကွက်တွင်အလွယ်တကူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ၉၉% လိုအပ်သည်။
ပြန်. ဆောက်လုပ် ပိုကောင်းတဲ့ရောက်ရှိဖို့သင့်ရဲ့ site တစ်ခုလုံး SEO ဆိုသည်မှာ နှင့် ဘာသာပြောင်း
မည်သည့်အရာကိုမဆိုတည်ဆောက်ရန် Elementor PRO, ACF PRO နှင့် PHP / JS / CSS အနည်းငယ်ကိုသုံးပါ စိတ်ကြိုက် plugin (CRM၊ ပုဂ္ဂလိကဖောက်သည်clientရိယာ၊ အသင်း ၀ င်၊ …)
Search & Filters UI အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ
Custom Query ကိုရေး။ ဆက်သွယ်ပါ
ထုံးစံအဆင့်နှင့်အတူ relevancy ညှိ
ဖြစ်ရပ်မှန် - MyListing ရှာဖွေမှုကိုစာရင်း ၁ သန်းနှင့်အတူပျံပါစေ
နောက်ထပ် MyListing ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်သူရောက်ရှိနေသောစာရင်းသန်းပေါင်းများစွာကိုသူမဖြေရှင်းနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံလာခဲ့သည်။
ရှာဖွေမှုသည်နှေးကွေးသည်သာမက home page နှင့် Yoast sitemaps လည်းပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ MyListing add-on ကိုပြုပြင်ပြီးပြီ။ ယခုအခါသုံးစွဲသူဆိုက်သည်စာရင်းတစ်သန်းရှိသော်လည်းပျံသန်းနေသည်။
ဖြစ်ရပ်မှန် - MyListing ရှာဖွေမှုရလဒ်များ၏တိကျမှုကိုတိုးတက်စေပါ
စာရင်းများကိုလုံလောက်စွာတိကျစွာရှာမတွေ့သောကြောင့် MyListing ဖောက်သည်သည်ကျွန်ုပ်တို့စတူဒီယိုသို့လာခဲ့သည်။ အချို့သောစိတ်ကြိုက်နယ်ပယ်များကိုရှာဖွေခြင်းမရှိသေးပါ။
myListing သည် standard archive ရှာဖွေခြင်းကိုအသုံးမပြုသောကြောင့်အပြည့်အဝ add-on တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရသည်။
ယခု add-on အသစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ client visitors ည့်သည်များသည်စာရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
ဖြစ်ရပ်မှန် - ပြင်သစ်ကုန်စုံဆိုဒ်မှရုပ်ပုံများ ၄၀၀၀ ကိုထုတ်ယူပါ
ဖောက်သည်သည် Grocery ၏စတိုးဆိုင်ထုတ်ကုန်များ၏ဓာတ်ပုံ ၄၀၀၀ ကိုယူခဲ့သည်။
ထုတ်ကုန်များကို (က) မှတင်သွင်းသည် Kezia II ကို ငွေသားထုတ်ယူသည့်ဆော့ဝဲလ်သည် WooCommerce ဆိုင်သို့“La Teste က de Buch မှ Magasin Bio"။
ထို့နောက်ရုပ်ပုံများကိုမီဒီယာစာကြည့်တိုက်တွင် upload လုပ်သည်။
By ပုံရိပ်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း (OCR)အတွက် WPSOLR add-on ကိုအသုံးပြုသည် Google Vision API.
ထို့နောက်အားဖြင့် Elasticsearch အတွက်မာဂုပညာရှိ indexing သူတို့ရဲ့ OCR ကျမ်းနှင့်အတူ။
ထို့နောက်မီဒီယာစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပြီး“ Wine Bordeaux 2019” ကိုရှာဖွေသည်နှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်နှင့်တွဲဖက်ရန်လိုအပ်သည့်ပုံများကိုပြန်လည်ပေးအပ်သည်။
Artificial Intelligence ဖြင့်ပုံများကိုရှာဖွေပါ
ဖြစ်ရပ်မှန် - ထုံးစံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်
သူရှာဖွေနေတာကအရင်ရာထူးနေရာတွေအရင်နေရာတွေမှာမကြာခဏအဆင့်ရောက်နေတယ်ဆိုတာသတိထားမိလို့ client တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ ဘယ်သတင်းစာအတွက်ဒါမကောင်းဘူး
အခြားတစ်ဖက်တွင်, နေ့စွဲအားဖြင့် sorting ပထမ ဦး ဆုံးရာထူး၌ဆီလျှော်ပို့စ်များကိုပြသခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Elasticsearch ၏ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို အခြေခံ၍ add-on အသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒီ feature ကသူတို့ရဲ့တိကျမှန်ကန်မှုကိုနှင့်၎င်းတို့၏ရက်စွဲများနှစ် ဦး စလုံးအရသိရသည်ရလဒ်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ပို၍ ကောင်းသည်မှာအချိုးအစားတိကျမှု / နေ့စွဲကို WPSOLR admin တွင်ညှိနိုင်သည်။